माधव नेपालमाथि किन यसरी खनिइन् रामकुमारी झाक्री ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
माधव नेपालमाथि किन यसरी खनिइन् रामकुमारी झाक्री ?
पटक(पटक विभाजनको चोट व्यहोर्दै आएको नेकपा (एमाले) फेरि टुक्रिएको छ। विभाजनले दुवैतिरका नेताकार्यकर्ताको मुहारमा न खुसी छ नत उत्साह नै।
एमाले विभाजनपछि माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समावादी) गठन गरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि भएका दुवै पार्टीका नेताहरूबीचको औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा नेताहरूबीच सैद्धान्तिक र कार्यदिशाको बहस भएको छैन।
छ त केवल एकआपसमा चित्त दुखाइ र आँसु खसाल्ने काममात्र। दुःख र आँशुका केही प्रसंग यस्ता छन्। माधव नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठनका बेला निर्वाचन आयोगमा रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपालको हात समातेको विषय सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चा भयो।
कतिपयले नेपाललाई झाँक्रीले पार्टी फुटाउन लतारेरै लगिन् भन्नेसम्मका टिप्पणी गरे। तर, झाँक्रीको अन्तरमन भने फुटबाट पटक्कै खुसी छैन। विभाजन अघिसम्म उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका १० स्थायी कमिटी सदस्य माधवकै पक्षमा थिए। तर, विभाजनको संघारमा उनीहरूले नेपालको साथ छोडे । युवा पुस्ताका समकालीन र केहीको जुनियर मानिने झाँक्री माधव खेमामा पुगिन्।
पार्टी फुटे पनि समकालीन र युवा पुस्ताका अग्रज नेतासँग उनको साथ छुट्ने कुरै भएन। झाँक्री घनश्यामलाई भेट्न उनकै नेतृत्वमा रहेको नेपाल अध्ययन केन्द्रमा भेट्न पुगिन्। घनश्यामसँग सामान्य शिष्टाचारपछि सुरु भयो झाँक्रीको गुनासो। सँगै रहेका एक नेताले बताएअनुसार सुरुमा झाँक्रीले पार्टी फुटेकामा घनश्यामसँग चित्त दुखाइन्। लगत्तै युवा पुस्ताका आफ्ना समकक्षी र आफूभन्दा सिनियर नेताको साथ छुटेकोमा दुःखी पनि भइन्।
घनश्यामले जब नेपालका केही कमीकमजोरी र आफूले साथ छोड्नु परेको बाध्यता सुनाए, झाँक्रीले तरक्क आँसु खसालिन्। झाँक्रीको भनाइ थियो, ‘सबैसँगको साथ छुट्यो, म एक्लो भएँ ।’ ती नेताकाअनुसार त्यसपछि अनौपचारिक संवादमा बसेका सबै नेताका आँखा रसाए। तर, कसैले पनि एकअर्कालाई दोष दिएनन्। गाली गरे त मात्र मूल नेतृत्वलाई। झाक्रीहरु ओली र नेपालमाथि खनिएका थिए ।
झाँक्रीले घनश्याम भुषालसमक्ष आँसु खसालेको भोलिपल्ट अर्थात् १३ भदौमा भुसाल र योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरेलगायतका नेताले छलफल गरे, अनेरास्ववियुका पूर्वपदाधिकारीसँग। पूर्वपदाधिकारी सचिवालयका सदस्यसमेत गरेर ५४ जना अखिलका नेताकार्यकर्तासँग घनश्याम र योगेशले पालैपालो पार्टी विभाजन र मूल पार्टीमै बस्नुपर्ने बाध्यताबारे तीन घन्टा कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारे ।
भट्टराईले नेपालको साथ किन छोड्नपर्‍यो भनेर बताइरहँदा प्रसंग झिके चीनका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका नेता टंक कार्कीको । नेपालले भूमिगतकालमा कार्कीलाई १० वर्षभन्दा बढी समय कसरी भूमिकाविहीन बनाए भनेर बेलीविस्तार लगाए, योगेशले । र, उनले कार्कीजस्ता थुप्रै नेताको प्रसंग निकाल्दै निस्कर्ष सुनाए( यसरी नै अन्याय गर्छन् माधवले, त्यहीँ भएरसँगै बस्न सकिएन।
भुसालले सैद्धान्तिक विषय उठान गर्दै नेपालसँगको सहकार्य टुट्नमा आफ्नो अन्तिमसम्मको कसरत फेल भएको र रोएर छुट्टिनुपरेको बताए। उनको भाषणको बीचैमा उठिन् अखिलकी पूर्वउपाध्यक्ष भक्तकुमारी लामा। लामाको प्रश्न थियो, ‘भोलि केपी ओलीसँग फेरि रोएर छुट्टिनुपर्ने दिन आयो भने के गर्ने कमरेड ?’
भेलामा सहभागी अखिलका एक नेताकाअनुसार भुसालले यसको स्पष्ट जवाफ त दिएनन्। तर, पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुको विकल्प अब नरहेको सुनाए पार्टी एकताका लागि गठीत कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिमा नेपाललाई मनाउन नेपाल निवास कोटेश्वर धाइरहेका थिए, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरू । संवादका क्रममा नेपालले अघिल्लो दिन ‘पावर सेयरिङ’सहित १० बुँदेमा सहमति जनाएका थिए।
विवाद मिलाउन सक्रिय नेताहरू उत्साहित हुँदै घर फर्किए। तर, भोलिपल्ट बिहानै नेता नेपालले फोन गरेर बोलाए विष्ट, पाण्डेलगायतका नेतालाई। त्यो भेटमा सहभागी एकजना नेताकाअनुसार नेपालले फेरि अघिल्लो दिनको सहमतिमा केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रश्न उठाउँदै एकतामा जान नसिकने बताए।
हतास भएका नेताहरूले नेपालकै अघि आँसु खसाल्दै अब धेरै विवाद नगरौँ भने तर नेपालले अडान छाडेनन्। अन्ततः पार्टी विभाजन भएरै छाड्यो। ती नेताकाअनुसार नेपाल निवासमा सबैभन्दा बढी चित्त दुखाएर आँसु झार्ने नेता भने गोकर्ण थिए।